ရေသည်ယောက်ျား(သို.)နအဖစစ်အစိုးရ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Myanma News » ရေသည်ယောက်ျား(သို.)နအဖစစ်အစိုးရ
Posted by ရွှေဘိုသား on Aug 12, 2011 in Myanma News | 16 comments
ရွာထဲလည်းမရောက်ဖြစ်တာကြာနေပြီ အခုတလောအလုပ်မအားတာလည်းပါတယ် ကျောင်းအတွက်
Assignment ရေးနေရလို.လည်းပါတယ် ဒါပေမဲ.လည်း ၀င်တော.ဖတ်ဖြစ်ပါတယ်
အင်တာနက်သတင်းတွေထဲမှာ စိတ်မကောင်းစရာသတင်းကတော. ကျနော်တို. မြန်မာအစိုးရက ဧရာဝတီ
မြစ်ကြီးကနေ ရေအားလျှပ်စစ် ထုတ်ယူဖို.ကြိုးစားနေတဲ. သတင်းပါပဲ အခုတလော သတင်းမီဒီယာ
တွေကလည်းအဲဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ. အသက်သွေးကြောဖြစ်တဲ. ဧရာဝတီ ကိုရေအားလျှပ်စစ် ထုတ်ယူမှာ
ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာတွေ ထောက်ပြတော.လည်း လက်မခံကြပဲ တိုင်းပြည်ကောင်းကျိုးကို
မလိုလားလို. ဒီလိုဝိုင်းဝန်းဝေဖန်တာပါလို. ဘက်တော်သား ဆောင်းပါးရှင်တွေက အစိုးရသတင်းစာကို
အားကိုးပြီး ပြန်လည်ပုတ်ခတ် ရေးကြတာကိုလည်း အခုတလောအစိုးရသတင်းစာတွေမှာ မမြင်ချင်မှအဆုံး
တွေ.နေရတယ် တစ်တိုင်းပြည်လုံးရဲ. အသက်သွေးကြောဖြစ်တဲ. မြစ်ကြီးကို သူတို.ပထွေးတွေဆီ ရောင်းစားဖို.
လုပ်နေတာကို ၀ိုင်းဝန်းထောက်ပြတာကို လက်မခံပဲ ထောက်ပြသမျှ လက်ခါပြနေတာကြီးက ဒီမိုကရေစီ
နိုင်ငံကြီးဆီ ဦးတည်နေတာလား အာဏာရှင်စနစ်ဆိုးကြီးထဲ ၀ဲလှည်.နေတာလားကတော. သိသာလွန်းနေပါပြီ
အစိုးရသတင်းစာတွေမှာ မျက်နှာလိုမျက်နှာရ ဆောင်းပါးတွေရေးနေတဲ. ဆောင်းပါးရှင်တွေကလည်း
သူတို.ပထွေးတွေအလိုကျ အင်တာနက်သတင်းတွေမှာရော ပြင်ပမီဒီယာတွေကရော ထောက်ပြနေတာကို
အကျိုးမလိုလားလို. လုပ်ကြံဖန်တီးတာပါလို. ရေးထားတာတွေလည်း စိတ်မချမ်းသာစရာနေ.တိုင်း
တွေ.နေရတယ် သြဂုတ်လ ၉ ရက်နေ.ထုတ် အစိုးရသတင်းစာထဲမှာဆိုရင် ခေါင်းစဉ်ကြီးက
လက်တွေ.လုပ်ရက်တွေနဲ. နည်းနည်းမှ မလိုက်ဖက်သလိုဖြစ်နေတယ် တပ်ထားတဲ.ခေါင်းစဉ်က
(ထာဝရ အမွေအနှစ် မွန်မြတ်သည့် စေတနာ) တဲ. ကြားရတာ နားခါးစရာဖြစ်နေတယ်
ဧရာဝတီမြစ်ကြီးက ထာဝရအမွေအနှစ်ဆိုတာတော. မြန်မာလူမျိုးတိုင်းသိပါတယ်
မွန်မြတ်သည်. စေတနာ ဆိုတာကြီးကတော. ခွေးပါးစပ်က နတ်စကား ထွက်သလိုများဖြစ်နေမလားလို.တွေးမိပါတယ် “နိုင်ငံတော်၏ လျှပ်စစ်စွမ်းအင် လိုအပ်ချက်ကို ကာလတိုအတွင်း ပြည့်မီစွာ ဖြည့်တင်း ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ရေးအတွက် လျှပ်စစ်စီမံကိန်းများကို အရှိန်အဟုန်ဖြင့် အကောင်အထည်ဖော် တည်ဆောက် ပေးလျက်ရှိရာ ယခုအခါ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားများ တစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ် ပိုမိုရရှိနေပြီ ဖြစ်သော်လည်း အချို့ပုဂ္ဂိုလ်/အဖွဲ့အစည်းများ အနေဖြင့် ကချင်ပြည်နယ်အတွင်း အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက် လျက်ရှိသည့် ဧရာဝတီမြစ်ဆုံ မေခ၊ မလိခ၊ မြစ်ညာမြစ်ဝှမ်း ရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်းများနှင့် ပတ်သက်၍ နိုင်ငံတကာနှင့် ပြည်တွင်း ရှိ ပြည်သူလူထု အထင်မှား အမြင်မှား ဖြစ်စေရန် မဟုတ်မမှန် ဖန်တီးလုပ်ကြံ၍ ရေးသား လုပ်ဆောင်လျက် ရှိကြသည်”ဟု နိုင်ငံပိုင် သတင်းစာပါ အဆိုပါ ဆောင်းပါးတွင် ထည့်သွင်း ရေးသားဖော်ပြ ထားပါတာတွေ.ရတယ် ဒီလိုထောက်ပြတာ တကယ်ကို ပျက်စီးမှုမဖြစ်ရအောင်
၀ိုင်းဝန်းဝေဖန်တာဖြစ်တယ် ဒါကို လက်မခံပဲ သူတို.ထင်ရာသူတို.စိုင်းချင်နေကြတာ ဒီမိုကရေစီ
နိုင်ငံလား ဒီမိုကရေစီ စနစ်ကြီးဆီကို ဦးတည်နေတာလား ဆိုတာပြန်တွေးစရာဖြစ်လာတယ်
မြန်မာလူမျိုးတိုင်း ကိုယ်.မိဘလို အားကိုးနေရတဲ.
အမိဧရာဝတီ မြစ်ကြီးကို တရုတ်တွေဆီရောင်းဝယ်ပြီး အကျိုးအမြတ်ကို တရုတ်က
၇၀ ရာခိုင်နှုန်း မြန်မာအစိုးရက ၂၀ ရာခိုင်နှုန်း ကြားပွဲစားက ၁၀ ရာခိုင်နှုန်းဆိုပြီး
ကြားနေရတယ် အဲဒီအတိုင်းသာဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော. ပြည်သူတွေက ဘယ်ကအကျိုးအမြတ်ကို
အားကိုးရမှာလည်း သူတို.အတွက်နဲ. တရုတ်အတွက်ရယ် ကြားပွဲစားရယ်ပဲ
အချည်ကြီး ကော်မှာသေချာတယ် ဒီစီမံကိန်းကြီးကို အာဏာပိုင်တွေကတော. အမြန်ဆုံးအကောင်ထည်ဖော်ချင်နေကြတာ မဆန်းပါဘူး သူတို.က အမြဲတမ်း သူတို.အတွက်
အကျိုးအမြတ် များများလိုချင်နေတာကိုး သူတို.ကမှ တကယ်ကို ဦးပုည ရေသည်ပြဇာတ်ထဲက
ရေသည် ယောင်္ကျားဖြစ်နေပြီ နိုင်ငံပိုင် ရေကိုတောင် ပြန်ရောင်းစားတဲ. နိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေ
ဘယ်နိုင်ငံမှာမှ မတွေ.ဖူး မကြားဖူးဘူး ၉ ရက်နေ.က သတင်းစာထဲမှာ ထောက်ပြထားတာတွေက
ကောင်းကျိုးတွေချည်းပဲ ဆိုးကျိုးက နည်းနည်းမှကို မပါတာ ကောင်းကျိုးကျတော.လည်း ဒေသခံ
လူ ၂၆၀၀ လောက် အလုပ်ရတယ်။ အိမ်ထောင်စု ထောင်ဂဏန်းလောက် နေရာချထား ပေးခဲ့တယ်ဆိုတာ လောက်ပဲ ဖော်ပြထားတာ လူဦးရေ သန်း ၆၀ ကျော်လောက်နဲ. ဆိုင်တဲ.
အသက်သွေးကြော မြစ်ကြီးကို တရုတ်ကို မျက်နှာလိုမျက်နှာရ ရောင်းစားပြီး နိုင်ငံသား
၂၆၀၀ ကျော်လောက်သာ အလုပ်ရမှာ နဲ. ထောင်ဂဏန်း အိမ်ထောင်စုမျှသာ
နေရာချထားပေးမှာကျတော. သိပ်တော. မဟုတ်သေးဘူးလို.ထင်တယ် ကျန်တဲ. သန်းပေါင်း
မြောက်များစွာသောပြည်သူတွေကျတော. ဒီအတိုင်းပဲနေရမှာလား ဒီလိုလုပ်လို. ဘာအကျိုးအမြတ်မှ မခံစားရဘူးလား
အခုလိုပြောတာ အပေါ်မှာပြောတဲ. ၂၆၀၀ ကိုမနာလို လို.ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော် ကျနော်ထင်တာကို
လူ သန်း ၆၀ ကျော်လောက်ရှိတဲ. အထဲကမှ ၂၆၀၀ လောက်ပဲ အခွင်.လမ်းနည်းနည်းရမှာဆိုတော.
ဘယ်လိုမှကို မဖြစ်သင်.ဘူးထင်လို.ပြောတာပါ တစ်တိုင်းပြည်လုံးနဲ. သက်ဆိုင်တဲ.
အသက်သွေးကြော မြစ်ကြီးကို ခုတုံးလုပ်ပြီး အရောင်းအ၀ယ် လုပ်မှတော. တစ်တိုင်းပြည်လုံး
ရတဲ.အကျိုးအမြတ် ခံစားရမှာပေါ. အခုကျတော. အဲဒီ ပြည်သူ၂၆၀၀ ဆိုတာကလည်း သူတို.
ဒီစီမံကိန်းအတွက် တရုတ်ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုဟာ ဒေါ်လာ ၃ ဒသမ ၆ ဘီလီ ယံဆိုတာ နိုင်ငံတကာစံနှုန်းနဲ့ဆိုရင် သိပ်မများပါဘူး။ ဒါပေမယ့် သူတို့က ၇၀ ရာခိုင်နှုန်း အကျိုးအမြတ်ယူမယ်။ ပြည်ထောင်စု အစိုးရ က ၂၀ ရာခိုင်နှုန်း၊ ကြားပွဲစားက ၁၀ ရာခိုင်နှုန်း၊ ကချင်ပြည်နယ် အစိုးရနဲ့ ကချင်ပြည်နယ်လူထု အတွက်ရော ဘယ်လိုစဉ်းစားထား သလဲ။ ဒီစာချုပ်ဟာ မမျှတဘူး။ နောက်ပြီး ကြားပွဲစားဆိုတာ တရားဝင်လား။ များလွန်းတယ်။ လာဘ်ပေး၊ လာဘ်ယူတွေ ရှိနေသလား။ စတဲ. မေးခွန်းတွေကလည်း အင်တာနက်သတင်းတွေမှာ တွေ.နေရတယ် ဒီသဘောတူညီချက်စာချုပ်ကိုလည်း ၂၀၀၆ ခုနှစ်က ချုပ်ဖြစ်တာလို. သတင်းစာထဲမှာ ဖတ်လိုက်ရတယ် အမှတ် (၁) လျှပ်စစ်စွမ်းအား ၀န်ကြီးဌာန နှင့် တရုတ်နိုင်ငံ (China Power Investment Corporation) တို့ ချုပ်ဆိုခဲ့ကြကြောင်း လည်းပါဝင်သေးတယ် တည်ဆောက်မဲ.
မြစ်ဆုံ တမန်ဟာ ကွန်ကရစ်မျက်နှာပြင်အမျိုးအစားဖြစ်ကြောင်း တမံအလျားပေ ၄၃၀၀ နှင်.
တမံအမြင်. ၄၅၈ ပေရှိကြောင်းလည်း ဖတ်လိုက်ရတယ် မြစ်ဆုံ တမန်စီမံကိန်းဟာ တရုတ်နိုင်ငံရဲ.
ပညာရှင်တွေ နဲ.ပူးပေါင်းတည်ဆောက်ထားတာတို. တရုတ်ရေလှောင်တမံ နည်းတူ ပြုလုပ်ထားတာ
တို.လည်း ဖတ်လိုက်ရတော. တော်တော်တောင်စိတ်မကောင်းဖြစ်သွားတယ် သူတို.တရုတ်တောင်မှ
အမြဲတမ်းလိုလို ရေဘေးဒုက္ခသည် တွေအမြဲဘေးလွတ်ရာ ရွှေ.ပြောင်းပေးနေရတာကို
သတင်းစာထဲမှာ အဲလိုဖတ်လိုက်ရတော. ကျောတောင်ချမ်းမိပါရဲ.
ဆရာကြီးလူထုစိန်းဝင်းနဲ. Eleven Journal က CEO ဒေါက်တာ သန်းထွဋ်အောင်တို.
ထောက်ပြတာတွေ အင်တာနက်သတင်းထဲမှာ ဖတ်လိုက်ရတော. ပိုပြီးတော.တောင် ရင်လေးမိပါရဲ.
Eleven Journal က CEO ဒေါက်တာ သန်းထွဋ်အောင်တို. ပြောထားတာက
ပြီးခဲ့တဲ့ နှစ်လလောက်က တရုတ်အစိုးရကို မြစ်ဆုံစီမံကိန်းရယ်၊ သဘာဝဓာတ်ငွေ့ စီမံကိန်းရယ်၊ ကျောက်ဖြူ ရေနက်ဆိပ်ကမ်းတွေကို လာရောက်လေ့လာပြီး အကြံဥာဏ်ပေးမယ့် Think Thaanke Group တစ်ခုနဲ့ Eleven Media Group ရုံးမှာ ကျွန်တော်တို့တွေ့တယ်။ အဲဒီမှာပါတဲ့ လူအများစုက အသက် ၃၀၊ ၄၀ အရွယ် လူငယ်၊ လူလတ်တွေဖြစ်ပြီး စင်ကာပူတက္ကသိုလ်က PhD ဘွဲ့ရသူတွေ ပါပါတယ်။ သူတို့ လေ့လာရသလောက် မြစ်ဆုံရေကာတာ စီမံကိန်းဟာ မြန်မာလူထုကို ထိခိုက်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အချက် ကို ငြင်းပယ်မသွားပါဘူး။ ရရှိတဲ့ အချက်အလက်တွေကိုလည်း Professional ပီသစွာ တရုတ်အစိုးရ ကို တိတိကျကျ အစီရင်ခံသွားမယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒီဆည်ကြီး ခုနစ်ခု လုံးဝမဆောက်သင့်ဘူး။ အကယ်၍ မဖြစ်မနေ ဆောက်ရရင်လည်း အသေးနှစ်ခုပဲ ဆောက်သင့်တယ်လို့ သူတို့ပြောသွားပါတယ်။ သူတို. မြစ်ဆုံ “ဒီရေကာတာဟာ စစ်ကိုင်းပြတ်ရွေ့ကြောအနီးမှာ ရှိတယ်။ ကျိုးသွားရင် စက္ကန့် ၂၀ အတွင်း မြစ်ကြီးနားမြို့ရေမြုပ်သွားမယ်လို့ လည်း သတင်းတွေမှာဖတ်ရတယ်
အဲဒီလို ဖြစ်ခဲ.၇င် အစိုးရက တာဝန်ယူနိုင်မှာလား ဆိုတာလည်း တွေးစရာကောင်းလာတယ်
မြစ်ကြီးလည်း အခုတောင် တော်တော်ကောနေတာ
ဒီစီမံကိန်းကြီးသာ လုပ်ဖြစ်လို.ကတော. သေချာပေါက် တိမ်ကောဖို.ပဲ ရှိတယ်
နာဂစ်တုန်းကလို ကိုယ်တိုင်လည်း မကူညီ ကူညီမဲ.သူတွေလာတော.လည်း ဟောင်လွှတ်နေတာက
စာသင်ကျောင်း သင်ခန်းစာထဲမှာ သင်ခဲ.ရတဲ. အင်္ဂလိပ် ပုံပြင်
နွားစာကျင်းထဲက ခွေးလိုဖြစ်နေတယ် နွားစာ တွေကို ကိုယ်လည်းစားလို.မရ စားမဲ.နွားတွေလာတော.လည်း ဟောင်လွှတ်တဲ. ခွေးလိုမြန်မာအစိုးရက ပုံပြင်ထဲက ခွေးလိုဖြစ်နေတယ်
် တကယ်ကို ရေသည်ယောက်ျားတွေ ဖြစ်နေပြီ နိုင်ငံပိုင် ရေကို တောင်တရုတ်ကို
ရောင်းစားနေပြီ တရုတ်ကလည်း သူတို.နိုင်ငံ အကျိုးမြတ်ရဖို.ကို မြန်မာပြည်မှာ လာပြီး
ရေလှောင်တမံဆောက်လုပ်ပြီး အကျိုးစီပွားရှာတာ တကယ်လို.ေ၇လှောင်တမံ ကျိုးကျလည်း
သူတို. လူမျိုးတွေ ဒုက္ခခံရမှာမဟုတ်ဘူး မြန်မာလူမျိုးတွေ ခံရမှာပဲ ဆိုပြီ လာပြီး စမ်းသပ် ပြုလုပ်တာပဲ
ဖြစ်မယ်ထင်တယ် ကျနော်တို.နိုင်ငံကြီးက တရုတ်တို.၇ဲ. အစမ်းသပ်ခံနိုင်ငံကြီး ဖြစ်မှန်းမသိဖြစ်နေတာ
တော်တော်ကိုဝမ်းနည်းစရာကောင်းနေပြီ တရုတ်က ပစ္စည်းတွေ စမ်းသပ်ချင်ရင်လည်း ဒီနိုင်ငံကိုလာ
အစားအသောက် အဆိပ်သင်.မသင်.သိချင်ရင်လည်း မြန်မာနိုင်ငံအရင်ဖြန်.ဝေနဲ.
အစမ်းသပ်ခံနိုင်ငံကြီး ဖြစ်နေပြီ အခုလည်း ဒီ မြစ်ဆုံစီမံကိန်းကြီးသာ အကောင်ထည်ဖော်ဖြစ်ရင်
မြန်မာလူမျိုး တွေရဲ. အသက်တွေ ဘယ်လောက်တောင် ရေထဲမျှောလိုက်ရမလဲဆိုတာ တွေးပြီးရင်လေးမိတယ်
ကျနော်ဒီလို ရေးတာ သိလွန်းတတ်လွန်းလို.တော.မဟုတ်ဘူး သတင်းတွေဖတ်ပြီး ရွာထဲလည်း
၀င်ပြီး ရေးချင်တာကြောင်. ရွာသားတို.လည်း ၀ိုင်းဝန်းဝေဖန်နိုင်အောင် ရေးတာပါ
လိုအပ်တာရှိရင် မှားတာရှိရင်လည်း ၀ိုင်းဝန်းထောက်ပြကြပါလို. တောင်းဆိုပါတယ်
သံချပ်သီချင်းထဲကလို အာရှတိုက်၇ဲ. စပါးကျည် ငတ်နေကြတာမယုံနိုင်စရာပဲ
ထွက်လာတဲ့ ရေအားလျှပ်စစ်ရဲ့ ၁၀ရာခိုင်နှုန်းကိုပဲ ပြည်တွင်းက ရမှာတဲ့ဗျား။ အကယ်၍ ရေကာတာကျိုးလို့ မြစ်ကြီးနားမြို့ရေမြှုပ်ခဲ့ရင်ဆိုပြီး တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကို အမြင့်ပိုင်းဒေသ ပူတာအိုကို ပြောင်းရွှေ့ရန် စီမံချက်ရှိသတဲ့ဗျား…။
သဂျီးကတော့ ရွေးကောက်ခံ လွှတ်တော်အမတ်တွေထံ စာရေးတိုင်ကြားသင့်သတဲ့ဗျား…။
တို့တွေလွန်ခဲ့တဲ့ တစ်နှစ်ကျော်က ရွာပြန်တော့ မြစ်ကောတဲ့ဘက်တောင်ရောက်ခဲ့တယ်
မြစ်ကြောင်းက နေရာပြောင်းသွားပြီး ပြတ်တိပြတ်တောင်းနဲ့ အရင်လို ရေတွေတသွင်သွင်စီးနေတာမျိုးမဟုတ်တော့ဘူး
အဲတုန်းက ပုဂံဘက်လည်းဘုရားဖူးထွက်ခဲ့တော့ တန့်ကြည်တောင်အသွားမှာ သမ္ဗာန်သမားတွေအပြောအရ အဲဒီကမြစ်ကွေ့လည်း အဲဒီနှစ်မှာပဲ အတော်ကျဉ်းသွားတယ်ဆိုပဲ
ဧရာဝတီမြစ်ရေတက်လို့ ရေကျပြီးချိန်စိုက်ပျိုးကြမယ့် တောင်သူတွေ အဆင်မပြေဖြစ်မှာ သိပ်စိုးရိမ်တာပဲ
မပန်ပန် ပြောသလိုပဲ ကျနော်လည်း ဆောင်းပါးထည်းကလို နှစ်တိုင်း ရွှေဘိုပြန်ရင် စစ်ကိုင်းတံတားနားမှာ
သောင်ထွန်း နေတာကို စိတ်မကောင်းစွာတွေ.မိတယ်ဗျ
ဒါကျတော. အနိုင်ကျင်.ရမှန်းသိလို. ဘ၀တွေပါကို ဖျက်ဆီး ပစ်သလိုဖြစ်နေပြီ
ှဟုတ်ပါသည်~~ အလွန်ပဲကျောက်စိမ်းတူးတဲလူတွေရယ်~~ မဆင်မချင်စွန့် ပစ်တဲသဲတွေကြောင်ရယ်~~ ထပ်ပြီးတော့မြစ်ဆုံကိုပိတ်လိုက်ရင်~~ မုတ္တမပင်လယ်ကြီးက ဧရာဝတီတိုင်းနှင့်ရန်ကုန်တိုင်းကို ၀ါးမျိုသွားပါလိမ်မယ်၊
ကျွန်တော်တို. မိခင် “ဧ၇ာဝတီ” မြစ်ကြီးက
လက်တစ်ဆုပ်စာ လူတစ်စု ကြောင်.
စိတ်မကောင်းစရာတော့တကယ်အမှန်ပါပဲ ရင်လေးမိပါတယ် မြစ်ကြီးနားကြီးရယ် ဧရာဝတီကြီးရယ်
““ဘယ်နိုင်ငံမှာမှ မတွေ.ဖူး မကြားဖူးဘူး ၉ ရက်နေ.က သတင်းစာထဲမှာ ထောက်ပြထားတာတွေက
လူ ၂၆၀၀ လောက် အလုပ်ရတယ်။ အိမ်ထောင်စု ထောင်ဂဏန်းလောက် နေရာချထား ပေးခဲ့တယ်ဆိုတာ လောက်ပဲ ဖော်ပြထားတာ လူဦးရေ သန်း ၆၀ ကျော်လောက်နဲ. ဆိုင်တဲ.
နေရာချထားပေးမှာကျတော. သိပ်တော. မဟုတ်သေးဘူးလို.ထင်တယ် “””
By မသင်းသီရိ – ကြာသပတေး, 11 သြဂုတ် 2011
By ဗွီအိုအေ (မြန်မာဌာန) – ကြာသပတေး, 11 သြဂုတ် 2011
အင်း….ဖတ်ရတာ ရင်မောလိုက်တာ။ ကိုယ်တွေကသာ အင်တာနက်က သတင်းတွေ ဖတ်ရလို့ သိတာ။ ပြည်တွင်းက လူတွေခမျာ သိမှာ မဟုတ်။ သတင်းစာပဲ ဖတ်တော့ ဟုတ်လှပြီပဲ မှတ်မှာ။
ရွှေဘိုသားရေ…. ဥပမာပေးတာလွဲနေပြီလားလို့ပါ….။ ဆရာလုပ်တာမဟုတ်ဘူးနော်…။ ရေသည် ယောက်ျားက သူ့လုပ်အားနဲ့ရတဲ့ ငွေလေးရွေးကိုခင်တွယ်တာ…။ ဘယ်လောက်ထိတန်ဘိုးထားလဲဆိုရင် တိုင်းပြည်တစ်ဝက်ရတဲ့အထိတောင် သူ့ငွေလေးရွေးကို မစွန့်ဘူး…။ ချွေးနှဲစာလေ…။ တန်ဘိုးထားတယ်…။ ခုဟာကအဲဂလိုမှမဟုတ်တာချည်း..။ နော့…။
မြစ်ဆုံက နတ်ကြီးတယ်။ သိတဲ့လူတွေသိကြမှာပါ။ အဲဒီမှာ မဟုတ်တာလုပ်လို့ကတော့ ဥပမာဗျာ- လင်မယားလိုနေတာတို့ အပေါ့အလေးစွန့်တာတို့ ဆဲတာတွေ အဲဒါလုပ်ရင် ငန်းဖမ်းပြီးသေကြတယ်။ ဘယ်သူမှ ပြေးမလွတ်ဘူး။
အစ်ကို နေ၀န်းနီ ပြောတာကို ဆရာလုပ်တယ်လို.လည်း မထင်ပါဘူးဗျ
ကျနော်ကလည်း ရေေ၇ာင်းစားလို့ ရေသည်ယောက်ျားဆိုပြီး ပြောလိုက်တာပါ ကျနော်ဆိုလိုချင်တာက
ရေရောင်းစားလို. ရေသည်ယောက်ျား လို.ဆိုလိုတာပါ
ပြဇာတ်ထဲက ရေသည်ယောက်ျားနဲ.တော. နှိုင်းလို.တောင် ဒီကောင်တွေနဲ. မတန်ပါဘူး
ပြဇာတ်ထဲက ရေသည်ယောက်ျားနဲ့ နှိုင်းလို့မရဘူးလေ
ဘုရင်ကို လုပ်ကြံမယ်လုပ်လိုက် ကျေးဇူးကိုအောက်မေ့လိုက်နဲ့ မလုပ်ကြံရှာဘူး